रामेछापमा बन्दै नेपालकै दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल ? - ramechhapkhabar.com
रामेछापमा बन्दै नेपालकै दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल ?
रामेछाप–काभ्रे जिल्ला जोडने नेपालकै दोस्रो लामो झुलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएको छ । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र काभ्रेको चौरी देउराली गाउँपालिकाले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न चौरीखोलामा झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । झुलुङ्गे पुल निर्माण गर्नको संघीय सरकारले यस आर्थिक बर्षको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआार) तयार गर्नको लागि २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
झोलुङ्गे पुल निर्माण स्थल हालको मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपास हुनेछ । नेपालमा यसअघि बाग्लुङ-पर्वत जोडने कालीगण्डकी नदीमा नेपालकै सबै भन्दा लामो झोलुङ पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । उक्त पुलको लम्बाई ५ सय ७६ मिटर लामो रहेको छ । file photo